Home News Aqriso:-Kaftan Siyaasadeed Laga Sameeyay Sawirkii Xaaf Iyo Wasiir Sabriye!!
Aqriso:-Kaftan Siyaasadeed Laga Sameeyay Sawirkii Xaaf Iyo Wasiir Sabriye!!
SABRIYE: Araa xaad isla jooxaaree maad ila hadashid?
XAAF: Wacdalaana kula hadleen ee dhinac iiga leexo.
SABRIYE: Ina Adeeroow xaan kaa haleeyay ma waanan Ehel aheyn.
XAAF: Ma ninka Xasan ii soo raacay ee labadii ma jeeste Cadaado Caanaha ku siinaa ana Dhusamareb igu ceyrteeyay ayaan la hadlaa.
SABRIYE: War warqadii aan soo madmadoobeeyay miyaad ka hadlee taas waa la igu qasbay aniga rabitaankeyga ma aheyn.
XAAF: Iga gaarsii adiga iyo madax qurdubka madaxda kuu ah in aan aqaan ciyaal jeemis dhuub sida bud loogu garaaco.